- ဟယ်လို။ ကျနော်တို့ပွင့်လင်းပါတယ်။
ဇိမ်ခံ Castle, မီဒီယာစီးတီးဗြိတိန်, မန်ချက်စတာ, M50 2EQ ငှါး
24 /7ကိုဖွင့်။ (24 နာရီဘွတ်ကင်လိုင်း)
တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတိတဲ့အပိုင်းဖြစ်လာမှကျွန်ုပ်တို့၏ဇိမ်ခံကား Castle ဟိုတယ်များ၏ဝေါလ်အတွင်းပိုင်းအဆင့်။
တော်ဝင် grandeur အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိမ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲတိုက်၏အသီးအသီး, ခမ်းနားထည်ဝါ, ဇိမ်ခံနှင့်ဘုနျးကိုတစ်ဦးယုဂျဖြစ်ပါတယ်။
ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်: အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ စကော့တလန်အတွက်ရဲတိုက်ဟိုတယ် - ယှဉ်သာအောင်ထူးခြားငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကိန်းအောင်းရာပူဇော်သက္ကာဘို့ ရဲတိုက်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေထဲမှာ - ငါလုပ်ပါဟုပြောဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာ ရဲတိုက်မင်္ဂလာဆောင် ခရစ္စမတ် အိုင်ယာလန်အတွက်အကောင်းဆုံး Castle ဟိုတယ်နှင့်အတူ Sublimity- အသိအကျွမ်းခံစားကြည့်ပါ တစ်ဦးကဗီလာကိုငှားရမ်း တစ်ခုလုံးရဲတိုက်ကိုငှားရမ်း တစ်ကျွန်းကိုငှားရမ်း ပျားရည်ဆန်းလ အဆိုပါ Noble ဘဝတိုက်ရိုက် - အဆိုပါအံ့ဖွယ်သမိုင်းကြိုင် နှစ်သစ် ပါတီ သင့်ရဲ့အဖိုးတန်ခဏအမှတ်ရဖွယ် Make ရန်ဗြိတိန်မှာတော့တစ်ဦးကရဲတိုက်ငှားရမ်း မိမိဘာသာကိုယ်တိုင်ယူစားသောက်ရခြင်း တစ်ဦးရဲတိုက်အိပ်ခန်းထဲမှာနေဖို့ villa မင်္ဂလာဆောင်
ဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကို Select လုပ်ပါ ...
... နှင့်ရွေးချယ်ထားတိုင်းပြည်ကုဒ်ကဒီမှာ updated ပါလိမ့်မည်
ဇိမ်ခံ Castle ငှါး - သင့်ရဲ့အိပ်မက်ဟာ Reality ဖြစ်လာဘယ်မှာ!
သငျသညျဇိမ်ခံအားဖြင့်ဘယ်အရာကိုနားလည်ပါသလဲ? တစ်ဦးရဲတိုက်အိပ်ခန်းထဲမှာသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့တနင်္ဂနွေဖြုန်းသို့မဟုတ်သင့်အထူးတစ်ရက်သို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်ကျင်းပဘို့တစ်ခုလုံးကိုရဲတိုက်ငှားရမ်း? မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည် - သင်ကဇိမ်ခံကား Castle အရစ်ကျနှင့်အတူများစွာသောဇိမ်ခံရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အသေးစိတ် Check: ရဲတိုက် Estates
သင်တစ်ဦးစံနမူနာန်ဆောင်မှုများစုံလင်သောပေါင်းစပ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအစုံနှင့်သမိုင်းတစ်မူထူးခြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် - သငျညာဘက်အရပ်မှလာကြပါပြီ!
အဆိုပါအိုင်ယာလန်အတွက်ရဲတိုက် Break များ
သင့်ဖူး ကိုယ်ပိုင်တော်ဝင် Castle မင်္ဂလာဆောင်
တန်ခိုးအာနုဘော်, သမိုင်းနှင့်နှစ်သိမ့်ကဝိုင်းထားတဲ့အမှန်တကယ်ရဲတိုက်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာ, ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်မင်္ဂလာဆောင်ရှိခြင်း၏ Dream? ဇိမ်ခံရဲတိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့မခန်းစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူတစ်ရှင်ဘုရင်နှင့်မိဖုရားများကဲ့သို့ခံစားရ!
Intimate Castle Wedding For Two အားလုံးရဲတိုက်မင်္ဂလာဆောင်
ခရစ္စမတ် & နှစ်သစ်ကူး Break များ
ခရစ္စမတ် Break များ
နှစ်သစ်ကူး Break များ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူအမှန်တကယ် bespoke အတွေ့အကြုံများပူဇော်သည်တစ်ခုတည်းအသေးစိတ်စီစဉ်၌သင်တို့ကိုကူညီ - ဘယ်လောက်ပဲသေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးတွေ - နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူများကကျွန်တော် feature အပေါငျးတို့သရဲတိုက်သို့သွားရောက်အဖြစ်, သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီနှင့်တိုင်းရဲတိုက်အကြောင်းကို-to-date တက်နှင့် In-depth ဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအဘယျအသငျသညျကိုမွငျသငျသညျပေးဆောင်အရာဖြစ်တယ်။ အဘယ်သူမျှမက hidden စွဲချက်ရှိပါတယ်
ဇိမ်ခံကား Castle အတွက်အထူးကု
သငျသညျဗြိတိန်နှင့်အိုင်ယာလန်တစ်ဦးနတ်သမီးပုံပြင်-ပုံပြင်ရဲတိုက်ရှာဖွေနေပါသလား? ဇိမ်ခံကား Castle မှာငှါး, သင်သည်သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်လိုအပ်ချက်အရသိရသည်အမြတ်ရခြင်းအများအတွက်သီးသန့်ရဲတိုက်တစ်ဦးလက်ကောက်ယူစုဆောင်းမှုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သင်၏နောက်ဇိမ်ခံအားလပ်ရက်တစ်ဦးခမ်းနားတဦးတည်းလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားရဲတိုက်အချို့နှင့်အတူပူးပေါင်းပြီတကား
ကျွန်ုပ်တို့၏ featured ရဲတိုက်ကိုကွောကျရှံ့ဖှယျဗိသုကာဒီဇိုင်းကမ္ဘာ့အများဆုံးလက်ရာမြောက်သောဥပမာတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဤအအိမ်ရာများအများစုဟာ, တစ်ချိန်က nobility အားဖြင့်စည်ပင်, သမိုင်းများတွင်ညျ့နေကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးအမှန်တကယ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအတှေ့အကွုံကိုရောက်စေဖို့ State-Of-The-Art သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူသူတို့ကိုတပ်ဆင်ထားကြသည်။ extravagantly မရနိုင်ပါဘူးဆောက်လုပ်ရေးဝါကြွားသည်ဤရဲတိုက်, အထူးအသားပေးရဲတိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်စုဆောင်းမှုအတွက်ဥယျာဉ်များ, plush အတွင်းပိုင်းနှင့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော antiques.Discover သင့်ရဲ့အိပ်မက်နေရာထိုင်ခင်းမြှပ်နှံ!
အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients ဆိုရမည်
'' ကျနော်တို့ကစိတ်ကျေနပ်မှုကို client အားလုံးအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကင်းန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်အကျိုးအမြတ်ကြသူပျော်ရွှင်ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရမှတ်များဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားလုံးယူမထားပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကိုပြောပါရန်ရှိသည်သောအရာကို more ... ''
နယူးယောက်, USA သို့
ကျနော်တို့ဇိမ်ခံကား Castle အရစ်ကျနဲ့ရဲတိုက်အိပ်ခန်း၌အကြှနျုပျတို့၏နထေိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်။ ဟုပြောရပါမည် - သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးအဘို့မမေးနိုင်ဘူး။
ကျနော်တို့ငါ့သမီးရဲ့မွေးနေ့ပါတီအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ့်ဇိမ်ခံခန်းမရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့ကျနော်တို့ငှါးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်တစ်လွှားသို့ လာ. - ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖန်ဆင်းသောအဖွဲ့သည်။ ကျနော်တို့-Norfolk အတွက် Inglethorpe ခန်းမကြိုတင်ဘွတ်ကင်များနှင့်ကျွန်တော်လုံးဝကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။
ဇိမ်ခံကား Castle အရစ်ကျ၏အသင်းကကမ်းလှမ်း Excellent ကဝန်ဆောင်မှု။ ကျနော်တို့သူတို့နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယအားလပ်ရက်စီစဉ်နေကြသည်။ သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုယူနှင့်သင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဇိမ်ခံကား Castle အရစ်ကျ၏အဖွဲ့ကိုအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်လိုအပ်ချက်ကိုက်ညီမယ့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်ကြ၏။ တစ်ဦးကအလွန်နှစ်သက်အတွေ့အကြုံကို။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတို 4-ညဥ့်နေ့တရားသောရဲတိုက်အိပ်ခန်းထဲမှာနေ၏။ အဆိုပါ setting ကိုခမ်းနားကြီးနှင့်ကျွန်တော်လှပသောရဲတိုက်တစ်ခုဥယျာဉ်တစ်ခုစိတ်ကိုဖမ်းစားမြင်ကွင်းကိုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမယ့်ခရီးစဉ်အတွက်မစောင့်နိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဇိမ်ခံကား Castle ငှါး။
Kevin P ကို
ကျနော်တို့ Puggiestone အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းအများဆုံးအံ့သြစရာများနှင့်ဗဒေအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဇိမ်ခံကား Castle ငှါး။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူနှင့်အထောက်အကူအဖွဲ့နှင့်အတူပိုပြီးအားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့မျှော်လင့်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနင်္ဂနွေချိုးဘို့ငှါးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်နှင့်အတူကြိုတင်ဘွတ်ကင်များနှင့်ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါတယ်။ ကြီးမြတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်။ ထိုအခါသူတို့ကို ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာကိုသူတို့ရှိသမျှသည်ဘတ်ဂျက်အဘို့အရာတစ်ခုခုရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအခမ်းအနားအဘို့အငှါးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်ကနေဘွတ်ကင်ဖို့ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်သည့်ရဲတိုက်၏ဂုဏ်အသရေ, ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျနော်တို့လက်ခံရရှိကြောင်းခြွင်းချက်န်ဆောင်မှုအားဖြင့်ကိုအလွန်ကျေနပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဇိမ်ခံကား Castle ငှါး။
စပိန်ရေ Cay မှာကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်နေတဲ့စိတ်ကူးအတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးများအတွက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်။ အဆိုပါရဲတိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အရှေးခယျြမှုကိုနားထောင်ပြီးနောက်ငှါးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်၏အဖွဲ့ကအကြံပြုခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဇိမ်ခံကား Castle ငှါး။
အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ဦးရဲတိုက်မင်္ဂလာဆောင်ရှိခြင်း၏အိပ်မက်ကိုမြင်မက်နှင့်ငါ၏အသက်တာ၏အများဆုံးအထူးနေ့၌မင်းသမီးလေးနဲ့တူခံစားရပါပြီ။ ဇိမ်ခံ Castle အရစ်ကျငါ၏အအိပ်မက်စစ်မှန်တဲ့လာစေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အအလုပ်များအချိန်ဇယားကိုငါ့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဖြုန်းဖို့အချိန်အများကြီးမရကြဘူး။ ဇိမ်ခံကား Castle ငှါးနှင့်အတူ, ငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတက်ဖမ်းခြင်းနှင့်စကော့တလန်ကုန်းမြင့်ထွက်လည်ပတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။ ဒါကအများကြီးလိုအပ်နေသောချိုးခဲ့သည်။ ဇိမ်ခံကားရဲတိုက်၏အဖွဲ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်ငှါး။
ငါကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာငါ့မိသားစုနှင့်အတူခရစ္စမတ်အားလပ်ရက်ဖြုန်းချင်တယ်။ ငါနှင့်ငါ့ဇနီး - ငါတို့သည်နှစ်ခုစလုံးစုံလင်သောနေရာကိုရှာဖွေခဲ့ကြပြီးတော့ကျနော်တို့ငှါးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်ကနေ Mustique ကျွန်းအကြောင်းကိုသိရန်လာ၏။ ကျနော်တို့ငှါးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်၏အသင်းနှင့်အတူကိုအလွန်သဘောကျပြီးဖြစ်ကြပြီးအလွန်အမင်းသူတို့ကိုအကြံပြုမညျ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ပျားရည်ဆမ်းခရီးတစ်ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ဇိမ်ခံနေရာကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ ဇိမ်ခံကား Castle အရစ်ကျမှာကျွမ်းကျင်သူများပြီးပြည့်စုံသောနေရာထိုင်ခင်းရှာတွေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မအတူတူနေတဲ့အကြီးအအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်ဇိမ်ခံကား Castle ငှါး
ကျနော်တို့အနေနဲ့ထူးခြားဆန်းပြားတည်နေရာမှာခမ်းနားမင်္ဂလာဆောင်ချင်တယ်။ ထိုငါတို့သည်တစ်ခုလုံးကိုရဲတိုက်ကိုငှားရမ်းရန်ရှာနေခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ဇိမ်ခံကား Castle ငှါးဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသူတို့တတ်နိုင်သမျှတိုင်းလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကြပါပြီ - ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအညီပြီးပြည့်စုံသောရဲတိုက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုညာဖက်သတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်းမှ
ကျနော်တို့ Towerhouse Castle အတွက်အံ့သြစရာ Self-ကူညီနေတဲ့အားလပ်ရက်ခဲ့ရပြီးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကမှနည်းပြအိမ်ကိုအကုန်အကျေးဇူးတင်စကားငှါး!
ကျနော်တို့ငှါးဇိမ်ခံကားရဲတိုက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကြိုတင်ဘွတ်ကင်များနှင့် Calivigny ကျွန်း၌ နေ. ခဲ့သည်။ အစကတည်းကမှ finish ကိုအံ့သြဖွယ်ဝန်ဆောင်မှု။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
T က DERRY
သည် booking ခရစ္စမတ်နှင့်နှစ်သစ်ကူး
ဇိမ်ခံ Castle ငှါး,
24 /7ကိုဖွင့်။ (24 နာရီဘွတ်ကင်န်ဆောင်မှု)
အခမဲ့တွင် Call 0808 133 5988
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတောင်းဆို: + 44 (0) 113 3450420
ဇိမ်ခံ Castle ငှါး
25 အနောက် 31st လမ်း,
11th ညီထပ်, နယူးယောက်စီးတီး,
ခရီးသွား Jargon buster
အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များ / ကိုယ်စားလှယ်
မူပိုင်ခွင့်© 1960 - 2018 ဇိမ်ခံကား Castle reserved အားလုံးအခွင့်အရေးကိုငှါး။
နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပါ အင်ဒိုရာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအာဖဂန်နစ္စတန်ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအန်ဂွီလားအယ်လ်ဘေးနီးယားအာမေးနီးယားနယ်သာလန်အန်တီအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန္တာတိကအာဂျင်တီးနားအမေရိကန်ဆာမိုအာသြစတြီးယားၾသစေတးလ်ယူးဘားအော်လန်အဇာဘိုင်ဂျန်ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘာဘေးဒိုးစဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘယ်လ်ဂျီယမ်Burkina Fasoဘူလ်ဂေးရီးယားဘာရိန်းဘူရွန်ဒီဘီနင်စိန့်ဘာသယ်လဲမီဘာမြူဒါဘရူနိုင်းဘိုလီးဗီးယားဘရာဇီးဘဟားမားဘူတန်ဘူးဗက်ကျွန်းဘော့ဆွာနာဘယ်လာရုစ်belizeကေနဒါကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကွန်ဂို (ကင်ရှာဆာ)ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံကွန်ဂို (ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ)ဆွစ်ဇလန်Cote d'Ivoireကွတ်ကျွန်းစုချီလီကင်မရွန်းတရုတ်နိုင်ငံကိုလံဘီယာကော့စတာရီကာကျူးဘားကိပ်ဗာဒီခရစ္စမတ်ကျွန်းဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဂျာမနီဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအယ်လ်ဂျီးရီးယားအီကွေဒေါနိုင်ငံအက်စ်တိုးနီးယားအဲဂုတ္တုပြည်၌အနောက်တိုင်းဆာဟာရအီရီထရီးယားစပိန်အီသီယိုးပီးဖင်လန်ဖီဂျီဖောက်ကလန်ကျွန်းစုMicronesiaဖရိုးကျွန်းစုပြင်သစ်gabonယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနေးဒါGeorgiaပြင်သစ်ဂီယာနာဂါဇီးဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရင်းလန်းဂမ်ဘီယာဂီနီနိုင်ငံGuadeloupeအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံဂရိနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစုဂွာတီမာလာဂူအမ်ကျွန်းဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟောင်ကောင်ကြားသိနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟွန်ဒူးရပ်စ်ခရိုအေးရှားဟေတီဟန်ဂေရီအင်ဒိုနီးရှားအိုင်ယာလန်ဣသရလေလူသား၏ကျွန်းအိႏၵိယဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုအီရတ်အီရန်အိုက်စလန်အီတလီဂျာစီဂျမေကာယော်ဒန်မြစ်ဂျပန်ကင်ညာကာဂျစ္စတန်ကမ္ဘောဒီးယားကီရီဘာတီကော်မ္မရိုဇ့်စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်ကိုရီးယား, မြောက်ကိုရီးယား, တောင်ကူဝိတ်ကေမန်ကျွန်းစုကာဇက်စတန်လာအိုနိုင်ငံလေဗနုန်တောစိန့်လူစီယာလီချင်စတိန်းသီရိလင်္ကာနိုင်ငံလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလီဆိုသိုလစ်သူလူဇင်ဘတ်လတ်ဗီးယားလစ်ဗျားနိုင်ငံမော်ရိုကိုမိုနာကိုမော်လ်ဒိုဗာမွန်တီနီဂရိုးစိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း)ဒါဂတ်စကာမာရှယ်ကျွန်းစုမက်ဆီဒိုးနီးယားမာလီျမန္မာႏုိင္ငံမွန်ဂိုလီးယားမကာအိုမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများမာတီနစ်Mauritaniaမွန်ဆာရတ်မော်လ်တာမောရစ်ရှမော်လ်ဒိုက်မာလာဝီမက္ကစီကိုမေလးရွားမိုဇမ်ဘစ်နမီးဘီးယားနယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနိုင်ဂျာNorfolk ကျွန်းနိုင်ဂျီးရီးယားနီကာရာဂွာနယ်သာလန်ေနာ္ေဝးနီပေါNauruနီယူးနယူးဇီလန်အိုမန်ပနားမားပီရူးပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံဖိလစ္ပုိင္ပါကစ္စတန်ပိုလန်စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်Pitcairn-Puerto Ricoပါလက်စတိုင်းပေါ်တူဂီပလောင်းပါရာဂွေးကာတာနိုင်ငံပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားဆားဘီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုရဝမ်ဒါဆော်ဒီအာရေဗျဆော်လမွန်ကျွန်းစုseychellesဆူဒန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံစင္ကာပူႏုိင္ငံစိန့်ဟယ်လီနာဆလိုဗေးနီးSvalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen ကျွန်းများဆလိုဗက်ကီးဆီယာရာလီယွန်ဆန်မာရီနိုsenegalဆိုမာလီယာဆူရာနမ်စဝ်တုန်နှင့်ပရအယ်လ်ဆာဗေးဒေါဆီးရီးယားဆွာဇီလန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများချဒ်ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမြေတိုဂိုထုိင္းႏုိင္ငံTajikistanအဘိဓါန် Tokelauအရှေ့တီမောတာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူနီးရှားTongaကြက်ဆင်ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုTuvaluထိုင်ဝမ်တန်ဇန်းနီးယားယူကရိန်းယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူနိုက်တက်စတိတ်မိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများအမေရိကန်ြပည်ထောင်စုဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာတီကန်စီးတီးစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဗင်နီဇွဲလားVirgin Islands, ဗြိတိန်Virgin Islands, အမေရိကန်ဗီယက်နမ်ဗာနူအာWallis နှင့် Futuna-ကျွန်းများဆာမိုအာယီမင်မာယော့တ်တောင်အာဖရိကဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
နာရီ 123456789101112 min 51015202530354045505560 PM AM